Rasm: filimka Padman oo sameeyay todobaadkiisa kowaad ganacsi la aqbali karo – Filimside.net
Rasm: filimka Padman oo sameeyay todobaadkiisa kowaad ganacsi la aqbali karo
Taariikhda: February 16, 2018
Superstar Akshay Kumar, Radhika Apte iyo Sonam Kapoor filimkooda Padman ayaa sameeyay todobaadkiisa kowaad ganacsi la aqbali karo asigoo keenay 62 Crore (Trade Figure) sida shabakada Boxoffice India soo daabacday.
Padman si wacan ayuu isku celiyay afartiisa maalmood ee ugu dambeesay kadib markii ganacsi dhex dhexaad ah uu sameeyay sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay.
Gobolada Punjab, Delhi, UP iyo Gujarat ee filimada ka caawiyaan inay mudo dheer tiyaatarada baaqi ku ahaadaan Padman si adag maka gadmaayo taasi oo muujineyso in filimkaan halkii marka hore laga filaayo inuu hiigsado uusan gaari doonin waloow uu Mumbai ku xoogan yahay.
Maalintiisa 8-aad ama Jimcadiisa labaad Padman waa u muhiim inuu si wacan isku celiyo waayo hada waa filim guuleestay balse inuu Hit dhameestiran noqon karo waxay kaga xiran tahay sida uu filimka Aiyaary isaga dhaciyo kaasi oo maanta masraxa ku cusub.
Fadlan hoos kaga bogo Padman iyo todobaadkiisa maalmood ee ugu horeesay ganacsiga uu maalin walbo sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Jimco – 10 Crore
Sabti – 13.50 Crore
Axad – 16 Crore
Isniin – 5.75 Crore
Talaado – 6 Crore
Arbaco – 7 Crore
Khamiis – 3.75 Crore
Wadarta Guud – 62 Crore (Trade Figure) (Qiyaas lacagtaan 100% shabakada BOI uma fariisinin)
Waxaa Aqrisay 729